Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo sheegay in ay dili rabeen ciidamada yimid xafiiskiisa – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaRa’iisul wasaaraha Itoobiya oo sheegay in ay dili rabeen ciidamada yimid xafiiskiisa
Hiiraan Xog, Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmad ayaa sheegay in qaar kamid ah ciidankii labo toddobaad kahor ugu tegey xafiiskiisu ay doonayeen in ay isaga khaarijiyaan.
Abiy ayaa khudbad uu baarlammaanka ka hor jeediyey ku sheegay in uu maalintaas qosol iyo dhoolla-cadays muujinayey balse dhab ahaantii aanu ku faraxsanayn sida ay wax u dhaceen.
Dhinaca kale, wuxuu tilmaamay in uu socdo shirqool lagu dhabar jebinayo isbedellada waaweyn ee siyaasadda dalkaas lagu sameeyey lixdii bilood ee lasoo dhaafay, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Socodkii qaar kamid ah milaterigu ku yimaadeen xafiiskaygu ma ahayn keliya mid sharci darro ah ee aad buu halis u ahaa, sababtoo ah ujeedadu waxay ahayd in la curyaamiyo isbedellada siyaasadeed ee socda” Abiy Axmad ayaa sidaas yiri.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo hadalkiisa sii wataa wuxuu mar kale barlammaanka kahor yiri “Isa xilligaas, markii xaaladdu caadiga kusoo noqotay kaddib, waxaa la maqlay qaar kamid ah ciidamada oo leh ‘Wuu naga baxsaday intaanan dilin kahor.’”
Hadalka Abiy Axmad ayaa kusoo aadaya dhowr maalmood kaddib markii uu Taliyaha Ciidamada Qalabka Sida ee Itoobiya Jeneraal Seare Mekonnen sheegay, in xabsiga loo taxaabay saraakiil ciidan iyo shaqsiyaad kale oo dowladda ka tirsan, kuwaas oo lagu soo eedeeyey in ay soo abaabuleen ciidamadii gadoodka sameeyey ee tegey xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Bishan Oktoobar 10keedii ayey ahayd markii ku dhowaad 250 askari oo ka tirsan milateriga Itoobiya ay iyagoo hubkooda wata yimaadeen Xafiiska Abiy Axmad.
Ciidamada oo kasoo ruuqaansaday fariisimo ay ku lahaayeen duleedka Addis Ababa, waxay ka cabanayeen xuquuq yari iyo in aan si wanaagsan loola macaamilin, waxayna Ra’iisul Wasaaraha ka codsadeen in mushaharaadka iyo gunnooyinka ay qaataan loo kordhiyo.
Askarta gadoodka sameeyey ayaa raalli gelin ka bixiyey falka ay ku dhaqaaqeen kaddib markii uu si wanaagsan ula hadlay ballanqaad fiicanna u sameeyey Ra’iisul Wasaaruhu.